अभिनेत्रीहरु आफूमाथि हुने गरेको यौन शोषणको खुलासा। – कर्णाली 24 डट कम
अभिनेत्रीहरु आफूमाथि हुने गरेको यौन शोषणको खुलासा।
Karnali 24१२ असार २०७८, शनिबार १९:१९
पछिल्लो समय बलिउड अभिनेत्रीहरु आफूमाथि हुने गरेको यौनशोषण शोषण (कास्टिङ काउच)का बारेमा खुलेर बोल्न थालेका छन् । यसैबीच ‘सेक्रेड गेम्स’लगायतका चर्चित वेबसिरिजमा काम गरिसकेकी अभिनेत्री सुरवीन चावलाले पनि बलिउड इन्डष्ट्रीमा हुने गरेको ‘कास्टिङ काउच’को बारेमा खुलासा गरेकी छन् ।
अभिनेत्री सुरवीनको यस खुलासापछि बलिउड उद्योगमा महिलाहरुको सुरक्षा र सम्मानमाथि पुनः प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । त्यसोत, यसअघि पनि अभिनेत्री कंगना रनौत, राधिका आप्टे, टिस्का चोपडा, पायल घोषल, नीना गुप्तागायतले पनि बलिउड उद्योगमा हुने गरेको कास्टिङ काउचको बारेमा आ–आफ्नो अनुभव सेयर गरिसकेका छन् ।
तीन पटक कास्टिङ काउचको सिकार बनिन् सुरवीन
पिंकविलालाई अन्तर्वार्ता दिदै सुरवीनले भनेकी छन्, ‘मैले तीन पटक कास्टिङ काउचको सामना गर्नु पर्यो । एक समय मलाई फिल्ममेकरसँग जानका लागि भनिएको थियो । एक रोलका लागि निर्देशकले मलाई भनेका थिए, ‘‘म तपाईको शरीरको अंगको हरेक इञ्च जान्न चाहन्छु ।’’ तर, मैले त्यस्तो ब्यक्तिहरुको बेवास्ता गर्न सुरु गरेँ ।’
साउथ उद्योगमा पनि त्यस्तै अनुभव!
अभिनेत्री सुरवीनले साउथ फिल्म उद्योगमा पनि उस्तै अनुभव पाएकी छन् । उनले भनिन्, ‘साउथ फिल्म उद्योगमा अझ एक जना हाँस्यास्पद ठूला निर्देशक थिए, एक राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता निर्देशक । उनले मेरो धेरै लामो अडिशन लिए ।
लगभग एक शिफ्टसम्म चल्यो मेरो अडिशन । मैले विभिन्न किसिमका अभिनयहरु (मोनोलग, अचानक केही भन्नु) गर्नु पर्ने थियो । म विरामी पनि थिएँ । अडिशनपछि म सिधै घर फर्किएँ । तर, मलाई निर्देशकले अचानक मुम्बई बोलायो र धेरै डरहरु देखाउन खोज्यो । तर, मैले यी सबै कुराको इन्कार गर्दै धन्यबाद दिए ।’
सुरवीनका अनुसार उक्त निर्देशक हिन्दी र अंग्रेजी बोल्न जान्दैनथे । उनी तमिल मात्र बोल्न जान्दथे । उनले यसबारे सबै कुरा अर्को ब्यक्तिलाई बोन लगाएका थिए । त्यस ब्यक्तिले मलाई फोनमा भन्यो, ‘सरले तपाईलाई नजिकबाट जान्न चाहनुहुन्छ । किनभने एउटा फिल्म बनाउनका लागि लामो समय लाग्छ ।’
क्लिवेज हेर्न चाहन्थे फिल्ममेकर
त्यस्तै, अभिनेत्री सुरवीनले बलिउड उद्योगमा आफूले सामना गर्नुपरेको कास्टिङ काउचको बारेमा बोल्दै भनिन्, ‘धेरै पहिले म एक कार्यालयबाट बाहिर निस्कनुप¥यो, किनभने मलाई त्यस्तो गर्नका लागि उक्साइएको थियो ।’
उनले पथ भनिन्, ‘एक फिल्म निर्माताले मेरो क्लिवेज कस्तो छ ? भनेर हेर्न चाहन्थ्यो । मेरो तिघ्रा हेर्न चाहान्थ्यो । बलिउड उद्योगमा पनि यस प्रकारका क्रियाकलापहरु साच्चिकै हुन्छन् ।’ न्युज 24 बाट साभार।
१० असार २०७७, बुधबार ०९:५९
जिम नै नजाने ऐश्वर्या ४७ वर्षसम्म पनि फिट
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०८:२५
नेपाली फिल्ममा सुनिल सेट्टी भिलेन,अनमोल नायकको भुमिकामा देखापर्दै।
४ असार २०७८, शुक्रबार ११:११
मेरो भाग्यमा कुनै पुरुषको प्रेम छैन’ : मनिषा कोइराला
१६ आश्विन २०७८, शनिबार १३:५८
सुँगुरको मिर्गौला मानिसमा सफल प्रत्यारोपण १२ असार २०७८, शनिबार १९:१९
माधब नेपालले दिए पार्टी हाक्ने जिम्मा भाइरल पुण्य गौतमलाई १२ असार २०७८, शनिबार १९:१९
८० के.जी. गाेरुकाे मासु भाग लगाउंदै गर्दा १३ जना पक्राउ १२ असार २०७८, शनिबार १९:१९